Mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, neChipiri vakaparura hurongwa hwekusangana nevatungamiri venyika dzekuchamhembe kwe Africa vachitaura kuti munyika maberekera ingwe.
VaTsvangirai vakaita musangano muLusaka nemutungamiri weZambia, VaRupiah Banda. VaTsvangirai vanga vakatarisirwa kuitawo musangano nemutungamiri weMozambique, VaArmando Guebuza, neChipiri manheru.
VaBanda ndivo sachigaro weSADC Troika on Politics uye mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, ndivo mutevedzeri wavo.
VaGuebuza ndivo imwe nhengo yechitatu muSADC Troika. VaTsvangirai vari kuda kuti vatatu ava vaite musangano weSADC Troika nechimbichimbi kuitira kuti vazeye nyaya dziri kunetsa muZimbabwe. VaTsvangirai vanoti matongero ari kuitwa nemutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, ava kupa kuti munyika musamire zvakanaka.
Gurukota muhofisi yaVaTsvangirai, VaJameson Timba, vanoti VaBanda varatidza kushushikana nezvave kuitika muZimbabwe.
NeMuvhuro VaTsvangirai vanonzi vakasangana naVaMugabe kuti vakurukure zviri kunetsa, asi zvinonzi hapana chakabuda sezvo VaMugabe vari kutsika madziro vachiti havana chavangakwanise kuita pane nyaya dziri kunetsa vachiti zhinji dziri kumatare.
Vane ruzivo nezvemusangano weMuvhuro vanoti VaTsvangirai wakataura nezvemutongo wedare reSupreme Court wekuti VaLovemore Moyo veMDC havachisiri mutauriri wedare reparamende, nyaya yekusungwa kwaVaElton Mangoma, gurukota rezvemhando dzemoto uye nyaya yemhirizhonga iri kuitika munyika.
VaTsvangirai naVaMugabe vava nenguva yakareba vachinetsana pamusoro penyaya dzinosanganisira kuramba kwaVaMugabe kugadza mubati wehomwe muMDC, VaRoy Bennett, semutevedzeri wegurukota rezvekurima, kuita humbimbindoga kwaVaMugabe mukugadza magavhuna ematunhu anobva kubato ravo, uye kusarudzwa kwevamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika kunonzi kuri kuitwa naVaMugabe vasina kugara pasi nevamwe vavo sezvinodiwa nechibvumirano cheGlobal Political Agreement.